Nyochaa LG G2, smartphone nke nwere sentimita 5,2 na Snapdragon 800 | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa LG G2, smartphone nke nwere sentimita 5,2 na Snapdragon 800
Nacho Cuesta | | android, Mobiles
Taa bụ ụbọchị ụlọ ọrụ LG na-eweta ọnụ G2 ọhụrụ ya na Spain, onye nọchiri anya Optimus G na doro anya na-egosi ihe dị mkpa qualitative itu ukwu na ngwaike, ojiji na ika nkà ihe ọmụma.
E nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na LG G2 ma ọ bụ maka nke ahụ, anyị ga-ekwu maka ha niile nke nta nke nta.
1 Nka nka na ụzụ
3 Usoro njikwa
4 Ọnụahịa na nnweta
A na-ahụ LG G2 site na ịbụ otu n'ime ọdụ mbụ na ahịa na-agbakwunye ọkwa ọhụrụ ahụ Snapdragon 800 site na Qualcomm. Anyị na-ekwu maka quad-core processor nke na-arụ ọrụ na 2,26Ghz, anụ ọhịa n'ezie nke na - ebute oke oke mmiri n'ọnọdụ ọ bụla.
Sonye Snapdragon 800 anyị nwere ngụkọta nke 2GB nke Ram, karịa ego zuru oke iji nwee ike nweta ezigbo akwụkwọ akụkọ nke ngwa mmeghe na-enweghị imebi arụmọrụ na opekata mpe.
Ndị na-egwu egwu ga-ahụ LG G2 dị oke mma ma ọ bụ na maka akụkụ eserese, ụlọ ọrụ ahọrọla maka GPU Adreno 330 MP nke na-arụ ọrụ zuru oke n'egwuregwu na-achọsi ike dị ka Real Racing 3 ma gafere 3DMark benchmark larịị.
Ike, LG G2 nwere oke ike na ya 5,2 anụ ọhịa ahụ na-enye anyị ohere inweta ihe ọ juiceụ juiceụ ya niile. Akụkụ ya etoola ntakịrị iji ruo 138,5 x 70,9 x 8,9 millimeters, ihe dị mma na-echebara nha ngosipụta ahụ, agbanyeghị, iji gbochie ya itolite oke, LG belatara okpokolo agba dịkarịa ala. Nke gbara gburugburu LCD panel nke n'agbanyeghị, bụ IPS na Full HD (423i).
Nnukwu ihuenyo dị na obere obere ahụmịhe bụ ihe anyị chọrọ ogologo oge ma enwere ekele maka ya mgbe ị na-ebu LG G2 n'akpa anyị. Ekwesịrị m ịsị na site na nkọwa, ọdịiche, na akụkụ nlele, ihuenyo nke a smartphone bụ otu nke kasị mma na anyị nwere ike ịchọta taa.
La n'azụ igwefoto bụ 13 megapixels ọ na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na 1080p na 60fps, ihu na-ebelata mkpebi ya na 2,1 megapixels. Igwefoto azụ na-egosipụta usoro elekwasị anya 9, mgbatị anya, f2.4 oghere anya, na ihe mmetụta 1/3.
Ngwa igwefoto nke LG G2 wetara na-enye anyị ohere ịgbanwe nnọọ ole na ole oyiyi parameters (ISO, nguzo ọcha, nchapụta ...), tinye mmetụta ma ọ bụ ụdị dị iche iche (mgbawa, panorama, HDR, ...) nke foto. Ọtụtụ nhọrọ iji nweta ọtụtụ n'ime igwefoto na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu na-enwu gbaa ma na-agbakọ n'ọchịchịrị maka ekele ọkụ ya.
Na ọkwa nchekwa anyị na-ahụ 16GB ma ọ bụ 32GB Dabere na ụdị anyị na-azụta, ya bụ, enweghị oghere itinye kaadi microSD.
N'ikpeazụ, LG G2 nwere 3000 mAh batrị dị n'ime nke ahụ ga-enye anyị nnwere onwe dị nso na ụbọchị abụọ nke ojiji dabere na ngwa ndị anyị na-agba. Na ule m ejirila m karịa awa 48 na-enweghị nsogbu ya mere enwere ekele dị ukwuu na ọdụ dị ike dị otú ahụ.
Nzube nke LG G2 bụ mara mma dị mfe na doro anya na-akara ya nnukwu ihuenyo. Dịka anyị kwurula, edebela akụkụ n'akụkụ ka ọ dịkarịa ala na bọtịnụ raara onwe ya nye gam akporo na-ewere obere akụkụ nke ihuenyo ahụ. Na n'ihu anyị naanị nwere ika logo na-ege ntị na-ekwu okwu na a ọla ọcha na agba dị ka ọcha na-eguzo si nwa set. Enwekwara obere flash Ikanam n'elu nke ahụ ga-egosi anyị ọkwa mgbe anyị nwere.
Akụkụ azụ bụ nke nwere ike ịnwe akụkọ ọzọ. Na-eweta a ubé curved imewe na nsọtụ imeghari ka ọdịdị nke aka anyị ma si otú ahụ nwee ike ijide ya n'ụzọ ka mma.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na LG G2 nwere bọtịnụ ike na bọtịnụ olu dị n'okpuru igwefoto. Ọ bụ nkọwa na-adọrọ mmasị mana ọ ga-achọ anyị obere oge iji imeghari iji zere ịrịa ọrịa nke ịga n'akụkụ mpaghara. Igodo ike na-apụta ntakịrị oge na bọtịnụ olu iji pịa ya n'ụzọ dị mfe karị, ọbụlagodi, ihe karịrị otu oge anyị ga-emehie ihe ruo mgbe anyị ga-achọta ọnọdụ ya.
Azụ mkpuchi atụmatụ a larịị na nke onwunwu imecha ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị elee anya nke ọma, a na-ahụ ọnya diagonal dị ka mmetụ pụrụ iche. Na ala bụ njikọ microUSB (nke zuru oke maka iji ọdụ ụgbọ mmiri) yana n'akụkụ tray iji tinye microSIM.
LG G2 na-abịa Android 4.2.2 jelii agwa arụnyere dị ka ọkọlọtọ. Companylọ ọrụ ahụ etinyewo aka na ndị ọrụ ka mmelite wee rute ndị ọrụ na obere oge enwere ike, yabụ ndị nwere obi abụọ na ọ ga-ejide onwe ha.
Dị ka anyị kwurula, mmiri nke sistemụ arụmọrụ dị egwu yana LG nwere ahaziri ụfọdụ nke ngwa gị akpali dị ka QuickMemo nke na-enye anyị ohere idetu ihe ozugbo ma debe ha na interface gam akporo ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị nwekwara ike gbanye nnukwu ihuenyo 5,2 nke anụ ọhịa site na ịpị abụọ na mpaghara efu ma ọ bụ na ogwe ọnọdụ ma yabụ, ọtụtụ ihe nzuzo ndị ọzọ anyị ga-achọpụta ka oge na-aga.
Ọnụahịa nke LG G2 16GB bụ 599 euro n'oge mmalite ya ma enwere ike zụta ugbu a n'efu.
Ozi ndị ọzọ - Anyị nwalere LG Optimus G
Njikọ - LG G2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nyochaa LG G2, smartphone nke nwere sentimita 5,2 na Snapdragon 800
Egwuregwu bọl: FIFA 14 na PES 2014